कोरोना भाईरस के हो? किन मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्छ? – Swasthya Samachar
टेकराज पन्थी !
कोरोना केहि होईन कडा रूघाखोकी जस्तै हो, सामान्य हो, मास्क लगाएर केहि हुदैन, जाँच गरायो भने धेरैलाई कोरोना देखिन्छ, तातो पानी खायो भने ठिक भै हाल्छ, मानिसलाई कोरोना लाग्यो भनेर डर देखाउने मात्र हो, यस्ता कोरोना सँग डराउनु हुदैन, लक्षण देखिएकाहरूले परीक्षण नगराई भीडभाडमा खुलमखुल्ला हिड्ने, चेकजाँच नगराउने, चिसोतातोको समयमा रूघाखाकी लागि हाल्छ नी भनेर ब्यापक रूपमा भ्रम फैलाई रहेको पाईन्छ । हाटबजार, भिडभाडस्थल जस्ता क्षेत्रमा मास्क नलगार्इ मानिसहरू मनपरि हिडिरहेको देखिन्छ । महामारीलाई पुरा वेवास्ता गरेको देखिन्छ । अलि समस्या परेमा सरकारले केहि गरेन भनेर सरकारलाई दोष दिनेहरू पनि भेटिन्छन् । नागरिकको कर्तब्य र दायित्व के हो भन्ने विषयमा हामी सवैले भुलेका हुन्छौं । विश्वब्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको यस्ता विषयमा विज्ञहरूले ब्यापक अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् । Vaccine अजपनि Final भएको छैन, अनुसन्धान कै क्रममा रहेको छ । विश्वले स्वीकार गरिसकेको महामारीलाई हामी सवै सचेत र एक भै स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाउन सम्पूर्ण युवाहरू लाग्नुपर्ने अवस्था सृजना भएकोछ । जीवन रहे धन, सम्पत्ती, नातागोता, मनोरञ्जन सवैकुरा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो कोरोना भाईरस जसको Positive Report मा CT Value 15 भन्दा कम छ र Symptomatic देखिएको छ भने मात्र कोरोना भाईरस केहो भन्ने भोगेर ज्ञान हुन्छ । कसैको विना लक्षणको Positive Report देखियो र CT Value 28 भन्दा माथि छ भने त्यस्ता मानिसले कोरोना भाईरसका विषयमा गलत ब्याख्या पनि गरेको पाईएको छ । त्यसैले हेलचक्रयाई नगरी ब्यक्ति, समाज र समुदायको स्वास्थ्य सुरक्षामा जोडदिनु पर्ने जरूरी छ ।
स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार सार्स भनिने कोरोना भाइरस दुई प्रकारका छन् । पहिलो प्रकारको सार्स कोरोना भाइरस सन् २००३ मा पत्ता लागेको थियो । दोश्रो प्रकारको सार्स कोरोना भाइरस जसलाई नयाँ कोरोना भाइरस वा सार्स कोभी–२ भनिन्छ सर्वप्रथम चीनको वुहानमा सन् २०१९ डिसेम्बर ३१ मा देखापरेको थियो । कोरोना भाइरस परिवारका ७ प्रजाति मात्रै मानिसबाट मानिसमा सर्ने वैज्ञानिक र अनुसन्धान विज्ञहरूले बताएका छन् । सन् २००३ र २०१२ मा महामारी निम्त्याउने सार्स र मर्स भाइरस पनि यही परिवारका सदस्य थिए । सङ्क्रमित व्यक्तिले सरसामान वा सतह छोएर हात नधोई आफ्नो अनुहार छुँदा कोरोनाभाइरस शरीरमा छिर्न सक्छ। भाइरसले पहिला घाँटी, सासनली र फोक्सोका कोषलाई आक्रमण गर्छ। बिस्तारै ती अङ्गलाई कोरोना भाइरसहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो सङ्ख्या वृद्धि गर्न थाल्छन् र गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्छन्।
रोगविरुद्ध लड्ने क्षमता सामान्य रुघाखोकी लगाउने कोरोना भाइरसको जस्तै ४० हप्ताभन्दा कम भएको खण्डमा हरेक जाडो याममा यसको संक्रमण दर बढ्ने हुनसक्छ । जाडो मौसममा सुख्खा हावाका कणहरूमा भाइरसहरू बाँच्ने र संक्रमण दर तीव्र बनाउने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तै जाडो मौसमको सुक्खा हावाले श्वासप्रश्वास नलीको रोगविरुद्ध लड्ने क्षमतामा पनि परिवर्तन ल्याउँछ । प्राकृतिक वा खोप जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि विकसित भएको रोगविरुद्ध लड्ने क्षमता सय हप्ता भन्दा बढी समयसम्म सक्रिय भयो भने भविष्यमा यो रोगको संक्रमण दर निकै घट्न सक्छ भनेर विज्ञहरूले बताएको पार्इन्छ । यसर्थ यो कोरोना भाईरस अत्यन्त खतरनाक छ भन्न सकिन्छ ।
संक्रमण भएका ब्यक्तिसँग नजिक बस्दा नाक र मुख छोप्ने मास्कले हावा फिल्टर गर्दैन। एन ९५ मास्कले भने हावाबाट फैलिने संक्रमण पनि रोक्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर बजारमा यो मास्कको अति नै कमी छ । ‘एन९५ मास्क’ले निकै हदसम्म भाइरसबाट बचाउने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । यद्यपि यो मास्क पनि पूर्ण सुरक्षित भने नहुने बताइन्छ । मास्क लगाए पनि आँखाको माध्यमबाट भाइरस संक्रमण हुनसक्छ । राम्रो गुणस्तरको मास्क लगाउने र समय–समयमा फेर्ने हो भने संक्रमणबाट धेरै हदसम्म सुरक्षित हुने सकिने चिकित्सकहरुको भनाइ छ। सस्तो र नष्ट गर्न सकिने मास्क राम्रोसँग प्रयोग गर्न सके पनि विभिन्न संक्रमणको रोकथाम गर्न सकिने सरुवा रोग विशेषज्ञहरु बताउँछन् । सर्जिकल मास्कको नियमित प्रयोगले अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीलाई विभिन्न संक्रमण र बिरामी हुनबाट जोगाएको पाइएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
नेपालमा कोरोना भाईरसको प्रवेश गर्ने शुरुवाती दिनहरूमा मास्क लगाउने, जरूरी काममा सामाजिक दुरी कायम गरि मानिसहरू सँग भेटघाट गर्ने, कुनै वस्तु छोएमा सावुनपानीले हात धुने, हातधुन तत्काल संभव नभए हैण्ड स्यानीटार्इजर प्रयोग गर्ने, डिस्इन्फेक्सन गरी सामाग्रीको वा स्थानको प्रयोग गर्ने, बाहिरबाट आएका पाहुनाहरू निश्चित समय क्वारेन्टिन बसेर चेक गराएर मात्र आफ्नो घर जाने अवस्था थियो जुन व्यक्ति, परिवार, समाज र देश सुरक्षित गराउन धेरै संभव थियो । पछिल्ला दिनहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाका सामान्य उपाय सम्म पनि अवलम्बन हुन सकेका छैनन् । अहिले मास्क धेरैले लगाउन छोडेको पाईन्छ ।
अहिले मानिसहरूले मास्कको प्रयोग अति न्यून रूपमा प्रयोग गरेको पाईन्छ। भिडभाड, बजार, भेला, यात्रा आदिमा जादा पनि मास्कको प्रयोग हुन छोडेको छ । कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य सुरक्षा अप्नाईएका छैनन् । यसरी मास्कको प्रयोग समेत नगरी खुल्लम खुला भिडभाड, बजार, सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरि रहेका छन् । शुरूका दिनमा त्यति सुरक्षा अप्नाउदा कोरोनाको कहर ब्यापक भएको सवैलार्इ थाहैछ । यसरी सामान्य स्थिति जस्तै गरेर यातायातमा यात्रा गर्ने, होटल ब्यवसायमा पनि सुरक्षा विधि नअप्नाउने, कार्यालय, हाटबजार, पसल आदिमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको ख्याल नगर्ने र यस्तै प्रवृति बढ्रन दिने हो भने यसले मानव अस्तित्व माथि ठुलो क्षति पुराउन सक्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य सुरक्षा नअप्नाउनेहरूका लागि जिम्मेवार को हुने, के सरकार एक्लै नियन्त्रण गर्न सक्छ, के यहाँ बुध्दिजिवि वर्ग नभएको हो वा धेरै बुध्दिजिवि भएको हो, कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएमा लासलाई त छुन नसकिने अवस्थामा जवाफ कसले दिने, के कोरोनाको महामारी अव छैन भन्ने यथेष्ट आधारहरू केहि छन् कि छन् भने हामीले पनि थाहा पाउनु पर्यो, सामान्य सुरक्षा अप्नाउन नसक्ने हामीले के देशका असल नागरिक भएर सभ्य समाज बनाउन सकिएला, यदि आफुलाई कोरोनाबाट संक्रमित हुन बाट जोगाउन सकिएन भने आफ्नो परिवार, समाज, देश र विश्व नै ध्वस्त हुनबाट जोगाउन सकिएला ?, अनि ब्यक्ति समाजको अस्तित्व जोगाउन सकिएला ?, आज कोरोना समाजमा फैलिसकेकोछ यसलार्इ कसरी कोरोनाको संक्रमणबाट जोगाउन सकिएला भन्ने केहि सोच विचार छ कि ?, यस्ता महामारी फैलिनबाट जोगाउन सहयोग नगर्नेहरूलार्इ के संक्रामक रोग नियन्त्रण कानुन बमोजिंम अगाडि बढ्नु पर्ने हो ? र, हाम्रो यस्तै मास्क नलगाई हिड्ने, सामाजिक दुरी कायम नगर्ने, बाहिरबाट आएकालाई अलग सुरक्षित नराखि समाजमा घुलमिल गराउने, भिडभाड गर्ने, सुरक्षा विधि नअप्नार्इ ब्यापार ब्यवसाय गर्ने जस्ता लापर्वाही बढ्दै जाने हो भने एकदिन पक्कै पनि ठूलो दुर्घटना हुनेछ र आफुले आफुलाई पनि पहिचान गर्न सक्ने अवस्था रहने छैन ।
कोरोना भाईरस संक्रमण विकराल बन्दै गइरहेको बेला मास्क प्रयोगमा भने चरम लापरबाही बढ्दै गएको छ । खोप नबनीसकेको अवस्थामा भाईरस शरीरमा पस्न नदिन मास्क प्रयोग उत्तम विकल्प हो । मास्क प्रयोग समेत उचित तरिकाले गरेको पाइएको छैन । कसैले नाक छोप्ने तर मुख देखिने त कसैले मुखमात्र छोपेर नाक देखाउने, बोल्दा मास्क चिउडोमा राख्ने, भिडमा जादा समेत देखासिखीका लागि मास्क प्रयोग गर्ने, कसैले हातमा लिएर हिड्छन् र खासै सदुपयोग भएको पार्इदैन । यसरी कोरोनाको संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै जादा मास्क लगाउने तरिका र सदुपयोगमा ध्यान दिनुपर्नेमा मास्कको प्रयोगमा चरम लापरवाही बढेको छ । कोरोना जोखिमबाट बच्न मास्क प्रयोग नगर्ने माथि सुरक्षाकर्मी निर्मम बन्नु पर्ने देखिन्छ ।
“तपाईको मास्क खै ?” भन्ने अभियान चलाउन युवाहरू परिचालन गर्नु पर्ने देखिएकोछ । यस्ता अभियान जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवाहरू र युवाहरूले सकृय भएर थाल्ने हो भने अज प्रभावकारी हुनेछ । अहिले मास्क नलगाई हिड्ने, भिडभाड गर्ने, स्वास्थ्य सूरक्षा नअप्नार्इ गतिविधि गर्न दिने हो भने कोरोना संक्रमणको भयावह स्थिति आउन सक्छ । जनताको जीउधनको सुरक्षाका लागि यसमा सरकारले कठोर कदम चाल्नु पर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ । सरकारले नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च बनेको भन्दै यहि अवस्था कायम रहे अस्पताल र सुरक्षाकर्मीले धान्न नसक्ने चेतावनी दिईरहेको छ । साथै स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड नअप्नाए एवं हाल देखिएको लापरवाही कायम रहे नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था नियन्त्रण बाहिर जाने पनि चेतावनी समेत दिएको छ । संक्रमण दर दिन प्रतिदिन उच्च बनेकोले थप सचेतना अप्नाउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सुरक्षाकर्मीलार्इ सजक रहन सरकारले आग्रह गरेकोछ । हामी सवै संक्रमणको अवस्थालार्इ हेरेर गम्भीर हुनुपर्ने जरूरी छ । अव के गर्ने, आफ्नो दायित्व र कर्तब्यलाई आजै बुझ्न आवश्यक छ।
मास्क नलगाई हिडडुल गर्ने र अनावश्यक भिडभाड गर्नेलाई पक्रेर कारवाही गर्नु पर्ने हुन सक्छ, त्यसैले सभ्य नागरिकहरूले समाजमा संक्रमण फैलिनबाट जोगाउन अनिवार्य मास्क लगाउ। आफू सङ्क्रमित हुन र अरूलाई पनि त्यसको जोखिमबाट जोगाउन मास्कले धेरै हदसम्म सहयोग पुर्‍याउने हुदा आफु, आफ्नो परिवार, समाज र देशलाई सुरक्षित बनाउन मास्क लगाउ, सरसफाईमा ध्यान दिउ । जीवन रहे देश र समाजका लागि धेरै सहयोग गर्न सकिन्छ ।
टिप्स/जानकारी विचार/ब्लग समाचार स्वास्थ्य-टिप्स